မယ်သံ: တစ်နေ့တာ (Tag)
သမီးစံ လေး က 7.01.2012 မှ တဂ်ထားတာ ဆိုတော့ သိပ်နောက်မကျသေးပါဘူးနော် ။
တနေ့တာ ဆိုပေမဲ့ weekdays နဲ့ weekend မှာတော့ ကွာပါတယ် ။ ပုံမှန် ဖြစ်တဲ့ Weekdays အတွက် ရေးပေး လိုက်ပါတယ်နော် ။
(ကိုယ် က သာမန် လူတယောက်မို့ နေ့စဉ် လုပ်ရ တဲ့ အလုပ်တွေ က ထူးထူးခြားခြား မရှိလှပါဘူး ။ နိစ္စဓူဝ ကျင်လည်ရတဲ့ ပုံမှန်ဘ၀ ကိုမငြီးငွေ့ ဘဲ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သာမန် အိမ်ရှင်မတယောက်ပါ။)
ကဲမေးခွန်းလေးတွေ စဖြေပါမယ် ။ ဖြေဆိုချိန် ..၁ နာရီ အနှူတ် ထမင်းစားချိန်ပါ ...;P
♠ အိပ်ယာကနိုးနိုးချင်းအရင်ဆုံးဘာလုပ်သလဲ???
► မနက် ၆ နာ၇ီ ဆို ပုံမှန်နိုးနေပါပြီ ။ နိုးအပြီး ဘုရားစာ အာရုံထဲမှာရွတ်နေချိန် အလမ်း မြည်လာပါတယ် ။
ပြီးရင်တော့ မီးဖိုထဲသွား မျက်နှာအမြန်သစ်ပြီးရင် ထမင်းအိုးတည်ပါတယ် ။ ရေနွေးအိုးတည်ပါတယ်။
ပြီး ဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ၊ သောက်တော်ရေ နဲ့ အချိုရည် တခုခု နဲ့ မုန့်ဆွမ်း ကပ်ဘို့ အသင့်ပြင်ထားပေးပါတယ်။(အမျိုးသား က ဘုရား ကို ကပ် ပုတီးစိပ် ပြီးတော့ အဲဒါ စွန့်ပြီး ဘရိတ်ဖတ်စ် ပါတယ်) မီးဖိုထဲပြန်ဝင် အရွက်ကြော် နှစ်ယောက်စာ ထမင်းဘူးပြင်ပါတယ်။ အားလုံးအပြီး ရေချိုး ရုံးသွားဘို့ပြင် ဘုရားကန်တော့ ၇း၄၀ ဆို အိမ်က စထွက်ပါပြီ ။
ဟုတ် ကဲ့ ၆း မှ ၇း၄၀ ထိ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ် ကြာ Nonstop Action ပါ ။
♠ မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ ???
►ပေါင်မုန့် မီးကင် နဲ့ ကော်ဖီ ပါ ။
♠ လောလောဆယ်နေ့တိုင်းစားဖြစ်နေတဲ့ မနက်စာ...???
► ကော်ဖီ နဲ့ တခုခုပေါ့ ။ အမျိုးသား စားချင်တဲ့ မုန့် ကိုဘဲ ဦးစားပေး ၀ယ်ပါတယ်။
(သူ က ပေါင်မုန့် မကြိုက်တဲ့ သူပါ။)
♠ နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစားရတာကြိုက်ပါသလဲ ???
► အပြင်စာ ကြိုက်ပါတယ် ။ ထမင်းဘူးထဲ ကိုဖွင့်ပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ စားရတာ ထက် ဆိုင်မှာ အများကြီးထဲကရွေးပြီး ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြားထဲ စားရတာ ပျော်ပါတယ်။
♠ အခုလက်ရှိအစားချင်ဆုံးဟင်းကိုပြောပြပါ ???
► မြူ ရွက်သုပ် ....;P
♠ အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ ???
♠ ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ???
► ဒီမေးခွန်း ကို အတော် ထူးဆန်းပါတယ် ။ အစား စားချိန်မှာ ဘာ ကို စဉ်းစားရဦးမှာ လဲ ။ အစား စားနေတဲ့ အချိန်ခဏလေး မှာ တွေဝေ စဉ်းစား နေသူ တယောက်နဲ့ တော့ အတူတူ မစားချင် ပါဘူး ။
► ကိုယ်ဘဲ ခံစားချက်နည်းသူမို့လားမသိ ...ဘာမှ ထူးပြီး မခံစားရပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာ မှာ အိပ်ချိန် ကို ထည့်မတွက်ရင် ရုံးမှာ နေရတဲ့ အချိန် က ပိုများတော့ ရုံး ကလဲ ကိုယ့်ရဲ့ နေသားကျနေတဲ့ နေရာပါ ။ တခု သာတာ က ခင်မင်သူတွေ များများ ရှိတဲ့ နေရာ ။ ကိုယ်နဲ့ အတွေးအမြင် ခံစားချက်တွေ ဖလှယ် ရင် နားလည်တဲ့ သူတွေ ၇ှိတဲ့နေရာ ၊ တနည်းပြောရရင် ရင်ဘတ်ခြင်း တူတဲ့ သူတွေ ၇ှိတဲ့နေရာ ပါ ။ ဒီိတော့ ရုံးဆင်းချိန် အိမ်မှာ လုပ်စရာ အထွေအထူးမရှိရင် တန်းမပြန်ပါဘူး ။ ရုံးမှာဘဲ အလုပ်မပြီး လို့ မပြန်သေးတဲ့သူတွေ ကိုစောင့်ပြီးပြန်ပါတယ်။
♠ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဘာအရင်လုပ်တတ်သလဲ ???
► အိမ် ကိုသော့ဖွင့် ပြီးတော့ အတွင်း က ပြူတင်းမှန်သမျှ ဖွင့်ပစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ချိန် သော့ခလောက်ကြီး ဖွင့် ပြီး လူတယောက်မှ မရှိသေးတဲ့ အိမ်ထဲ ကို ၀င်ရတာ အရမ်းမုန်းပါတယ်။
►အ၀တ်အစား လဲပြီး မီးဖိုထဲ ၀င်ရတော့တာပေါ့ ။ အမျိုးသား က ထမင်းစားရင် အရေသောက်လေး အရွက်ကြော်လေး ပါစေချင်တာမို့ သူ့အကြိုက် ချက်ဖြစ်ပါတယ် ။
(ခုချိန် မှာ တယောက်မျက်နှာ က တယောက်အတွက် ဟင်းတခွက် မဖြစ်နိုင်လေတော့ ဟင်းကိုဘဲ အဓိကထားပြီး ချက်ရတော့မယ် မဟုတ်ပါလားရှင် ..အာဟင့်)
►ညကျမှ ဘုရားရှိခိုးတော့ အိပ်ယာဝင် ဘုရားရှိခိုးအပြီး မိဘ တွေ ကိုလဲ ကန်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိဘတွေ အသက်ကြီးပြီဆိုတာ တွေးမိရင်း ဆက်ပြီး မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံး တွေးမိပါတယ်။
♠ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေမှာ ဘာလုပ်သလဲ ???
♠ တအားစိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ ???
► အဲလိုမျိုးတော့ မရှိပါဘူး ။ စိတ်ရှူပ် လာရင် တော့ တယောက်ထဲ ဘတ်စ်ကား ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး တွေးနေခြင်ပါတယ်။(စလုံးမှာ) ဘတ်စ် ကား ကလဲ ပြေးနေ ကျမ အတွေးတွေ ကလဲ လျှောက်ပြေးနေတာပေါ့ရှင် ။
♠ အပြင်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်းသတိထားပြီးယူတတ်တဲ့ပစ္စည်း ???
♠ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ အချစ်ရဆုံးသောလူ ???
♠ သူစိမ်းတွေအထဲမှာ မိမိအယုံကြည်ရဆုံးသူ ???
► မရှိ။ :D
♠ အလုပ်ထဲမှာကိုယ်အခင်ဆုံးသူ ???
► အားလုံး အတူတူ ပါဘဲ ။
► အကုန် ကြိုက်ပါတယ်။ မကြိုက်တာ ကို မ၀ယ်ပါဘူး ။ လက်ဆောင်ရခဲ့လို့ မကြိုက်ရင်လဲ တခါထဲ သူများကိုပြန်ပေး လိုက်ပါတယ်။ နေရာ ကျဉ်းလေးထဲမှာ မကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ အရှူပ်မခံ သင့်ဘူးလေ နော်။
♠ လက်ဆောင်ရထားတဲ့အထဲကအကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းလေးတခု ???
► အကြိုက်ဆုံး ဆိုတဲ့ ပစ္စည်း မရှိပါဘူး ။
♠ ကိုယ့်ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဆုံးသူ ???
♠ အခုလောလောဆယ်အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ ???
► သမီးလေး နဲ့ အတူတူ နေချင်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ တနေ့တာအတွင်း အကြိုက်ဆုံး အချိန် ကတော့ ရုံးအသွားအပြန် Reffle Hotelေ၇ှ့ က ဖြတ်လျှောက်တဲ့ အချိန်ပါ ။ တရုတ်စကားပန်း ဖြူဖြူတွေ အများကြီး ပြီးတော့ အသံသာ တဲ့ ငှက်ကလေး တွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ နေရာ ကို ဖြတ်လျှောက်ရတာ ပျော်ရွှင်ရတယ် ။
အမေး အဖြေ လေးတွေ ကို မိစံလေး ဆီ က ကော်ပီ ကူးပြီး ပြန်ဖြေ တဲ့ အခါ တချို့ အဖြေ တွေ ဟာ ပြောင်းပစ်စရာ မလို အောင် အတူတူ ဖြစ်နေ တာ ကို တွေ့ ရလို့ ဒီ ညီမလေး ဟာ လဲ ကိုယ် နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ၀မ်းသာစရာ ပါ ။
သမီးစံ လေး ကျေနပ် ပါနော် ။
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, January 10, 2012
သမီးစံ January 10, 2012 at 6:17 PM
မြသွေးနီ January 11, 2012 at 6:15 PM
တစ်နေ့စာ Tagလေးက ဘလော့ဂ်တော်တေ်ာများများမှာ တွေ့နေရတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့ အဖြေလေးတွေ ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။